Variana amin’ny endrika ivelany
Nolalovan’ny « oloben’ny finoana » i Madagasikara. Anatra sy torohevitra, ireo raha atao bango tokana ny vatsy nentiny… Heverina fa samy nahazo ny anjarany rahateo ny Malagasy tsirairay izay niantefan’izany. Mety ho samy nanana ny nandraisany azy ihany koa anefa. Fatra-panaja raiamandreny ny Malagasy satria fantany tsara fa nandia fiainana lavitra izy ireny. Mahalala ny mety sy ny tsy mety. Mahafantatra ny rariny sy ny hitsiny, sns.
Anisan’ny fototra iray, nentin’ny Malagasy nanolokolo sy nanabe ny taranany io fananana fahalalana nateraky ny fiainana nodiavina io. Fototra naha tsara taiza, nahatonga ny taranaka malagasy hahalala fomba, ho tso-po, hifanampy, hatahotra an’Andriamanitra, hahafantatra ny tsiny sy ny tody, sns.
Raha nety tamin’ny Malagasy teo aloha ny fanajana raiamandreny sy ny fanabeazana ary ny fitaizana nomen’izy ireny, nahoana no tsy ho mety amin’izao vanim-potoana izao ? Satria, hono, tsy mifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny intsony. Tsia, tsy marina izany ! Ny endrika ivelany no mety hiova fa ny votoatiny, tsy tokony hiova. Sa ve, ohatra, samy hafa ny Andriamanitra natahoran’ny Malagasy fahiny sy ny Andriamanitra ivavahany ankehitriny ?
… Antony vitsivitsy kanefa goavana ny tsy nahafahan’ny Malagasy nitazona izay votoatin’ny fanabezana ny taranany izay. Iray amin’ireny ny tsy nahitany intsony an’ilay raiamandreny hampita ny fahalalana. Firy amin’ny raiamandreny miaina amin’izao vanim-potoana izao, ohatra, no mahafantatra fa manana ny hasina sahaza azy izy ? Mety ho vitsy aza sisa, angamba, ny mahafantatra izany atao hoe « hasina » izany.
… Raha tsy miverina any amin’ilay fototra sy loharano voajanahary nandrantoany fahendrena sy fahalalana ny Malagasy, ho sarotra ho an’i Madagasikara ny handroso ho any amin’ny tsara kokoa. Mila ezaka avy amin’ny tsirairay anefa ny fanatanterahana izany. Ny zava-dehibe ilaina sy anisan’ny laharam-pahamehana, ny fahalalana ny votoatin-javatra mba tsy ho variana amina kisarintsariny fotsiny. Eo hatrany ilay ilalaovan’ny sasany ny Malagasy. Diniho tsara anie e !